kulankii mudanayaasha baar-lamaanka Soomaaliya ee lagu ansixin lahaa Ra’iisul wasaaraha oo maanta baaqday. – Radio Daljir
kulankii mudanayaasha baar-lamaanka Soomaaliya ee lagu ansixin lahaa Ra’iisul wasaaraha oo maanta baaqday.
Oktoobar 10, 2012 6:20 b 0
Muqdisho, Oct 10- Warka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa soo sheegaya inuu maanta baaqday kulan ay yeelan lahaayeen baarlamaanka kaasoo sida wararku ay sheegayaan lagu ansixin lahaa Ra’iisul wasaaraha cusub Dr; Cabdi Faarax Shirdoon ”Saacid”
Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamanka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay? in guddoonka Baarlamanka uu dib u dhigay kulankaasi sabab farsamo awgeed, isagoo intaa ku daray in maalmaha soo socda uu qabsoomidoono kulankaasi.
Kulanka baaqday maanta ayaa la filayay in R/wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ”Saacid” uu khudbad ka jeeediyo kulanka Baarlanka, taas oo uu ku soo bandhigayo waxqabadkiisa iyo nooca ay noqoneyso xukuumadda uu soo dhisi-doono si uu Baarlamanka uga helo codka kalsoonida.
Warar hoose oo Daljir? ay ka helayso ilo xog-ogaal ah ayaa dhanka kale sheegaya inay mudanayaashu Muqdisho ku yeesheen kulamo gooni-gooniya kuwaasoo illaa hada aan la garanayn waxyaabaha ay sida dhabtaa salka ugu hayeen.
Baar-lamaanka Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay codka kalsoonida siiyaan ama diidaan Ra’iisul wasaare Saacid oo illaa hada aysan cadayn siyaasadihiisa dhabtaa, marka laga reebo mawqifkiisa marxalada cusub oo uu ku soo bandhigay masraxa siyaasadeed, wasiirka 1aad ee xukuumadda Soomaaliya ayaa laga sugayaa hadii la ansixiyo inuu soo dhiso gole dawladeed oo ka soo baxa shaqada hor taala DF ee Soomaaliya.
Askar ku geeriyootey shil gaari oo ka dhacay deegaanka Karin ee gobolka Bari (Dhegayso)
(Daawo) Garaad C/llaahi Cali Ciid oo soo dhaweeyay raysal-wasaaraha cusub ee Soomaaliya.